हेलो छिमेकी! :: Setopati
करिब चार वर्षपछि बल्ल मैले मेरो छिमेकीको नाम थाहा पाएँ। उनीहरूको पेशा अनि मूल थलो कहाँ हो भनेर पनि पत्ता लगाएँ।
हामीले लगभग पन्ध्र मिनेटको संवादमा यो बाहेक अरू पनि धेरै कुरा गर्न भ्यायौं। भेटेपछि हामी यसरी गफ गर्ने रहेछौं कि, अहिलेसम्म केको पर्खाइमा थियौं त भनेर एकछिन हाँस्यौ पनि। सायद दुई शब्दको ‘हेलो छिमेकी’ भन्न अल्छि गर्दा यस्तो भयो कि भनेर फेरि पनि हाँस्यौं।
वास्तवमा यत्रो वर्षसम्म हामीबीच झगडा भएर, मनमुटाव भएर नबोलेका होइनौं।
एकअर्कासँग बोल्ने कुरा नभएर नबोलेका थियौं। दुई अक्षरको ‘हेलो छिमेकी’ भन्न हिच्किचाउँदा वा विर्सदा हामी छिमेकी-छिमेकी बीचमा यति लामो दूरी बसेको थियो। एकअर्कासँग देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्दा र आँखा जुधिहाल्यो भने पनि फिस्स हाँस्दै वा एक शब्दको ‘हेल्लो’ स्वासले मात्रै भन्दा एक अर्कालाई चिन्दै नचिनेका थियौ।
छिमेकी र म बस्ने घरको बीचमा कुनै इट्टाले बनेको ठू–ठूला पर्खाल छैन। न त काठको, न त काडेँ तारले बेरेको अग्ला अग्ला बार नै छन्। न कुनै रूख, बोट विरूवा वा ढुङ्गाले हाम्रो सिमाना नै तोकिदिएको छ। न त कुनै प्रवेश निषेधको चिन्ह भएको बोर्ड नै छ।
हामी दुवैको घर एकअर्कामा जोडिएको छ। तराई भेगको झैँ समथर आँगन हाम्रो एउटै छ। जुम्ल्याहा दिदी बहिनी जस्तो घरको बाहिर र भित्रको स्वरूप पनि एउटै छ। यति मात्रै फरक छ कि म कहाँ आउन मानिसहरु नेभिगेटरमा यूनिट ३ भनेर लगाएर आउँछन् भने उनकोमा आउनेहरु यूनिट ४ भनेर आउँछन्। फरक यति हो कि तिहारमा मेरो घर झिलिमिलि हुन्छ र क्रिसमसमा उनको।
करिब त्यस्तै सात आठ महिना अगाडिको कुरा होला। ग्रोसरी सपिङ गर्न जान म ग्यारेजबाट गाडी निकाल्दै थिएँ। छिमेकीको दुई छोरीहरू आँगनमा खेलिरहेका थिए। मैले गाडी निकाल्ने वित्तिक्कै उनीहरु दुवैजना खेल्न छोडेर हात हल्लाएर बाई गरेँ।
हामीहरूले पहिला पनि एकअर्कालाई आक्कलझुक्कल देखिरहेको थियौं तर कसैले कसैलाई बाई पनि भनेका थिएनौं। कहिलेकाहीँ मैले उनीहरुलाई देखेर मुस्कुराए भने उनीहरू लजाउँदै खरायोको बच्चाझैं खुरूरू कतै भाग्थे अनि लुक्थे। तर उनीहरू आफैंले आज मलाई बाई भन्दा खुसी लाग्यो अनि मैले मुस्कुराउँदै गाडीको सिसा तल झारेर हात बाहिर निकाली बाई बाई गरें। उनीहरु फेरि लाजले खुरुरु भित्र गए। आफैं बाई गर्ने अनि आफैं लाजले भित्र जाने उनीहरुको बालापनले मलाई छोयो। म गएको उनीहरु लुकीलुकी हेरिरहेका थिए जुन म प्रस्ट साइड ऐनाबाट देख्न सक्थेँ।
त्यो दिनदेखि ती बालिका र म बीचको बाई-बाईको संवाद अलि प्रगाढ हुँदै गयो। हामीहरू एकअर्कालाई देख्ने बित्तिकै हाई भन्दा पनि बाई हुन थाल्यो। उनीहरू मलाई देख्नेबित्तिकै छिटो छिटो बाई-बाई भन्न आतुर हुन्थे। उनीहरूको यो व्यवहारले मलाई मेरो बालापन सम्झायो।
कहिलेकाहीँ म र उनीहरूको बुबा–आमाले गाडी निकाल्ने समय एउटै हुन्थ्यो। उनीहरू पछाडिको सिटबाट झ्यालको सिसामा नाक टस्साउँदै मलाई बाई भनेर मज्जा लिन थाले। उनीहरूको बुबाआमा र म एकअर्कालाई हेर्दै मुर्छा परेर मात्रै हाँस्थ्यौं। यो सिलसिला अलि महिना नै चल्यो।
एकदिन म साइक्लिङ गरेर आउँदै थिएँ, उनीहरू पनि आँगनमा आफ्नो सानो साइकलमा खेलिरहेका थिए।
उनीहरू आफ्नो साइकल लिएर मेरो नजिक आए र एउटै स्वरमा भने – ‘हेलो नेईवर (छिमेकी)।’ उनीहरु साह्रै मायालु थिए। मैले जिस्काउँदै भनेँ, ‘आज बाई नभन्ने?’ उनीहरू एकअर्काको मुख हेर्दै जेठीले भनिन्,‘तिमी हाम्रो छिमेकी हो त्यसैले अब हामी तिमीलाई छिमेकी भनेर बोलाउने। कान्छिले कुरा थपि,‘एस्, सी इज राईट।’
त्यो दिन यति मात्रै कुरा भयो। अर्को दिन फेरि म साइकलिङ गरेर घर आउँदै थिएँ, उनीहरु खुरर दौडिदै आए। मैले झ्याप्प ब्रेक लगाई हालेँ। एकछिन त मनको सातो गयो। कान्छी मेरो हात समात्दै ‘हेलो नेईवर प्लीज टेक अस इन टु योर्स हाउस्’ भन्न थालिन्। यसपटक जेठीले कान्छीको कुरामा थप्दै भनिन्, ‘प्लीज हामीलाई तिम्रो घर हेर्न मन लाग्यो। एकदिन भित्र लैजाउन’ भनेर जिद्दि गर्न थालिन्।
मैले ‘हुन्छ आजै जाने भए पनि जाऔँ’ भने। तर उनीहरुले ‘यतिखेर हाम्रो डिनर टाइम हो, अब अर्को दिन आउँछौं’ भनेँ। नभन्दै ढोकाबाट उनीहरू आमाले बोलाइहालिन्। उनीहरू ‘बाई’ भन्दै खुरूरर.. गए।
ढोकाबाट नै उनीहरूको आमाले मलाई ‘सरी यिनीहरू अर्लि डिमाण्डीङ’ र ट्रवलमेकर’ भइरहेका छन्’ भनेर जानकारी दिईन्। उनीहरू बोल्दैमा मलाई समस्या त के नै हुन्थ्यो र तर पनि उनले आफ्नो छोरीले गर्दा मलाई गाह्रो भयो कि भनेर चासो देखाईन्। यसरी चासो देखाउनुपर्ने औपचारिकता थियो छिमेकी र म बीच।
गत लक्ष्मी पूजाको दिन म ढोका बाहिर रंगोली बनाउँदै थिएँ। उनीहरू आफ्नो घरको झ्यालबाट मलाई हेरिरहेकी थिए। मैले पनि उनीहरुलाई हातको इशाराले बोलाएँ तर उनीहरु आएनन्। एकछिन पछि फेरि बोलाएँ। उनीहरू आफ्नो ढोकासम्म आए एकछिन केही नबोलि हेरिरहे। अब चाँहि मैले पनि बोलि फुकाएर नै बोलाए, हेलो छिमेकी, कम वन..............। उनीहरु खुरर दौडिए तर खै के भयो त्यसरी नै खुरूर.. दौडिएर आधा बाटोबाट नै फर्किए। अनि त्यहीँ झ्यालबाट हेरिरहेँ।
त्यो भन्दा केही दिन अगाडि उनीहरूको घर हलोइनले सजाएको थियो। झ्यालमा मान्छेको कंकाल झुण्डाएको थियो। एकदिन म अफिसबाट आउँदै गर्दा उनीहरुले ढोकाबाट ठूलो आवाजमा हेलो नेइर्वर भन्दै झ्यालतिर देखाए। म त्यतिखेर आफ्नै तनावमा थिए त्यसैले पनि उनीहरुको हेलो नेइर्वर र झ्यालतिर देखाएको दृश्यलाई फिस्स हाँसेर मात्रै जवाफ दिए। सायद त्यो दिन उनीहरुले मबाट केही शब्द वा त्यो भन्दा अलि बढी अरु केही प्रशंसाको अपेक्षा गरेका थिए होलान्। तर मबाट त्यस्तो केही नआएपछि उनीहरुलाई अलि नरमाईलो लाग्यो होला र सायद हुन सक्छ रंगोली हेर्न आउन मन लाग्दा लाग्दै पनि मेरो फेड्ल्ली व्यवहार नपाउँदा आउन गाह्रो मानेँ।
तिहारको दिन म आँगनमा बसेर फोनमा कुरा गरिरहँदा उनीहरु मेरो नजिक आए र भने, ‘हेलो नेइवर, ऊ त्यो के हो? उनीहरुले आँगनको रंगोली देखाउँदै भने। मैले फोन राखेर उनीहरूलाई आँगनमा लगेर रंगोली देखाए र विभिन्न रंगहरुको बारेमा सजिलो भाषामा बताए। उनीहरुले कति बुझे या बुझेनन् तर पनि त्यो रंगहरू र डिजाइन देखेर खुसी भए।
गत साता म इभिनिङवाक गरेर घर फर्कदै थिएँ। उनीहरु पनि उनीहरुकै मिठो लवजमा ‘हेलो छिमेकी’ भन्दै आए। मैले सोधेको थिइनँ तर उनीहरुले नै आज हामी हाम्रो साथीकोमा गएको, यो गेम खेलेको, यो खाएको अनि यस्तो कुरा गरेको। त्यहाँ अर्को नयाँ साथीलाई पनि भेटेको। त्यो साथीको ह्याट निलो थियो अनि नयाँ पनि। ममीले हामीलाई पनि त्यस्तै ह्याट किनिदिने भन्नुभएको छ। यो शनिबार हामी हाईप्वाइट गएर ह्याट अनि अरू शपिङ गर्ने। यस्तै आदि इत्यादि दिदीबहिनी भएर पालै पालो बोल्दै गए। म उनीहरुलाई एकटकले खुसीहुँदै सुनिरहेँ।
उनीहरुको कुरा सकेपछि यतिकैमा कान्छीले तिम्रो घर भित्र आज हामीलाई लैजाउँ न। हामी तिम्रो घरको सजावट हेर्न चाहन्छौ भन्न थालिन्। उनीहरू त्यहाँ एक्लै थिए त्यसरी घरभित्र लान पनि अप्ठ्यारो लाग्यो र अनि बुबाआमालाई सोधेर आउँ भने। जेठी एकैक्षणमा भित्र गईन् र उत्तिनैखेर ड्याडीले जाउ भन्नुभएको छ भनेर आईन्। आफूले जाउ भनेको नसुनेकोले उनीहरुलाई भित्र लान पनि अप्ठ्यारो लाग्यो अनि म आफैं उनीहरुको ढोकामा गएर ‘एस्क्यूज मी’ भने। उनीहरुको आमा थिइनन् त्यहाँ तर बाबा थिए। बाबाबाट नै स्वीकृति लिएर उनीहरुलाई भित्र लगेँ।
दुई पाइला भीत्र जान पनि कान्छीले मलाई बोक्न भनेर लाडिइन्। मलाई अचम्मको साथै खुसी पनि लाग्यो। मैले उनलाई मेरो कम्मरमा बोके। उनी खुसीले मलाई अँगालो हालिन्। कस्तो निर्मल रहर हो भनेर म भावुक पनि भएँ। उनको दिदीले मेरो हात समातिन्। मेरो काखमा उनी थिईन् अनि मेरो हत्केलामा उनकी बहिनी।
उनीहरुलाई मेरो घरभित्रको सजावट नौलो लाग्यो। उनीहरू सजाएको सामान यो के हो ऊ के हो भनेर जिज्ञासाको साथ सोधिरहेँ। यताउती दौडिदै हेर्दै उर्फिरहेँ। घरी सोफमाथि गएर उर्फछन् घरी बाहिर ब्याकार्डमा गएर हेर्छन्। फ्रिजमा के के छ भनेर देखाउ भन्छन्। चक्लेट देखेपछि खान्छु नि भनेर रहर गर्छन्। टिभी नजिकै सजाएको ढाका टोपी र अर्को ह्याट उनीहरु झिकेर लगाउन थाल्छन्। त्यहीँ नजिक भएको ऐना हेरेर एकअर्कालाई जिस्काउँछन्। घरी एकअर्कालाई अँगालोमा आएर खेल्छन् घरी भुइँमा फनफनी घुमेर नाँच्छन्। उनीहरुको यो लीला हेरेर म रमाउँदै थिएँ यत्तिकैमा ढोका ढकढक भयो।
उनीहरुको आमा रहिछिन्। आत्तिदै ढोका ढकढक गरेकी थिईन्। एकपल आफ्नो सन्तान नदेख्दा भएको पीडा उनीमा मैले देखेँ। उनले ढोकाबाट नै उनीहरुलाई बोलाईन्। उनीहरु अटेरी भएर त्यहीँ बसेँ। जान मानेनन्। मैले उनलाई भित्र बोलाए तर उनी आईनन्। न उनी भित्र आईन् न उनीहरु बाहिर जान माने। म बीचमा उनीहरु दुवैलाई हेरिरहेँ। उनी भनिरहेकी थिईन् हातमा समातेका सबै कुरा त्यहीँ छोडेर आउँ। तर उनीहरु सबै सामानहरु झन् अँगालोले कसेर जान मानिरहेका थिएनन्।
सानोमा आमाले नचिनेको कसैले दिएको नखानू, नचिनेको मान्छेको घरमा नजानू, जे पायो त्यहीँ चिज नलिनू आदि इत्यादि भनेको याद गरें। आमा नेपालको होस् वा विदेशको सबैको मन एउटै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो।
आखिर छोरीहरू आमाकोमा नगएपछि आमा नै भित्र आइन्।
कान्छीले भनिन् ‘हामी दुवै एकछिन खेल्छौ बरू तपाईं हाम्रो छिमेकीसँग परिचय अनि कुरा गर्नुस्।’
हामी दुवै एकअर्कालाई हेरेर अवाक् भयौ। अनि त्यहीँ दिन थियो चार वर्षको दौरानमा म र छिमेकीबीच एकअर्कासँग राम्ररी कुरा भएको।
उनले मेरो घरमा आएको पाहुना, चाडपर्व मनाएको अनि साथीहरुसँग पार्टी भइरहेको सबै याद गरेकी रहिछन्। अनि छोरीहरू त्यतिखेर छिमेकीले हामीलाई किन नबोलाएको भनेर पनि सोध्दारहेछन् अनि उनीहरू आफ्नो चाडपर्व, पार्टीमा पनि छिमेकीलाई बोलाउनू भनेर जिद्दी पनि गर्दा रहेछन्।
तर उनीहरुलाई हामीले त्यति सहज महशुस गर्दैन होला भन्ने परेको रहेछ। अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो अर्कै देश, संस्कार र संस्कृति बोकेका उनीहरू हाम्रो खाना र सेलिब्रसनमा फेरि बोर मान्यो भने। हामी दुवैले एकअर्काप्रति आ आफ्नो धारणा बनाएर नै एकअर्काको दुःख त परै जाओस् खुसीमा पनि सामेल गरेनौं।
यहीँ सिलसिलामा मैले यो कुरा पनि निकाले कि, जब उनीहरु त्यो घरमा आएका थिए त्यतिखेर उनीलाई मैले एक छोरी सहितको गर्भवती महिलाको रूपमा देखेको थिएँ।
त्यसको एक महिनापछि सानो छोरी जन्मेर उनीहरुको घरमा पार्टी गरेको पनि मैले ख्याल गरेको सुनाएँ। त्यतिखेर गएर बधाई दिन मन लागे पनि राम्रोसँग नबोल्दा र चिनजान नहुँदा अप्ठ्यारो लागेर बधाई दिन नपाएको कुरा पनि भन्न भ्याएँ।
उनले उत्तीनै खेर चार वर्ष अगाडिको बधाई अहिले दिँदा पनि भयो नि भनेर हाँसो गरिन्। अनि उनले गत साल तीन महिना जति तिमी घरमा थिएनौं अन्तै घर सर्‍यौ कि भनेर पनि लागेको कुरा गरिन्। त्यतिखेर म नेपाल गएको कुरा उनलाई सुनाएँ। एकअर्कासँग नबोले पनि एकअर्काको ख्याल हामीले गरिरहेको हामी दुवैलाई महशुस भयो।
खेलिरहेको ती बालिकाहरुलाई हेर्दै हामीले उनीहरुलाई धन्यवाद पनि दियौं। यदि उनीहरू ‘हेलो छिमेकी’ भनेर बोलाउन नआएको भए त्यो आँगनबाट यो आँगनको दूरी सात समुन्द्र भन्दा पनि अझ लम्बिन्थ्यो होला।
यसरी यस्तै यस्तै विषयमा करिब पन्ध्र मिनेट कुरा भएपछि बल्ल उनी अलि ढुक्क भईन्। बेलाबेलामा हेलो छिमेकी भन्दै बोल्ने छोरीहरुको छिमेकी खतरामुक्त भएको सायद उनले महशुस गरिन् होला।
एकछिन अगाडि छोरीहरु यहाँ आउँदा असुरक्षित महसुस गर्दै दौडिदै ढोका ढकढकाएको उनी हाम्रो यो संवाद र चीनजानपछि छोरीहरु सुरक्षित भएको उनले महशुस गरिन्। यसले पनि देखाउँछ जीवनमा एकअर्काको विश्वास जित्न एकअर्कामा एउटा स्वास्थ्य र आत्मीय कुराकानी हुन जरूरी छ।
खेल्दा खेल्दै उनीहरू हाइ काँढ्न थाले। तिमीहरूको सुत्ने समय भयो फेरि अर्को दिन आउँला भनेर उनी छोरीहरूलाई लिएर गइन्।
टाउकोमा टोपी लगाउँदै हातमा खेलौना र चकलेटहरू बोक्दै उनीहरू पनि गुडनाइट छिमेकी भन्दै गए।
उनीहरू गएको हेर्दै गर्दा मनमा ख्याल आयो ‘हैट्! जीवनमा यत्ति धेरै व्यस्त पनि हुनु हुँदैन रहेछ, कि मर्दा पर्दाको छिमेकी नै नचिनोस्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २७, २०७७, ०३:५६:००